Mboro yakangonzi shweee vachibva vanyemwerera zvavo - Nhau Dzevakuru
Mboro yakazonzi musoro shweee vachibva vanyemwerera zvavo zvikanzi I love beche riri tight. Zvakazoitika nezuro, kubva makuseni ndaingonzwa kuda mboro ndokufonera muface wangu kuti auye mutown iye kwakunditora kuyenda neni muchicken inn. Ndingasvirirwe muchicken inn here nhai? Ndakaramba kupinda ave kuti kumovie house, tayenda kuye hapana chaakamboita, ndaiti zvimwe achapinzawo chigunwe mubeche kusvika ndatunda. Iye aakungofambisa ruoko nepamsoro pemazamu achitotya kana kupinza ruoko mutop yangu.
Ndakambomubata bata ndichiti zvimwe angateedzerewo but ainge ave kutonyara murima imomo. Ndakapinza ruoko mupant make ndokunyatsonzwa kuti ane the right size yemboro yandaitsvaga. Pasina nguva ndakaona oburitsa ziso kunoibata so yaakutogwinha ainge atozvitundira. Varume musaite madera muchidaro. Ndakakurumidza kubuda imomo ndave kutonotsvagawo angagone kundisvira. Ndichisvika kumba, ndakawana paina baba Sean muroja wedu, amai Sean vainge vakaenda kumusha. Ndakasvikowana vakagara panze zvavo pamushana ndokuzama kuvaitira mastayera kuti vandisvire but vaitaridza kushaya basa neni. Ndakapinda mumba ndatoona kuti hapana changu.
Ndakavagaira zano ndokupfeka ka mini skirt kangu kanogumira pakanotangira. Ndakasvikogarawo nekanovel kangu pachair yaive kumberi kwavo. Ndakaona murume ongoita kucheka neziso ndikati zvangu zvaita. Ndaingoita kunge ndavarairwa
ndombovavhurira apa ndange ndiine kag-string zvekuti matama aro beche aibudikira. Pasina chinguva ndakaona murume kashort kaaive nako kave kufutawo ndikaziva kuti ndagohwesa. Ndakatanga zvangu kaconversation kasina basa. Ndakabvunza kuti sei vasina kuenda kubasa. He said he was given a 1 week off and was going kumusha magwana kumbonopedza shungu. Ndakaseka zvangu ndikati nhema mukuda kutivhara mava nesmall house hobho kubasa ikoko.
He insisted that he was faithful kumukadzi wavo. Ndakaseka zvangu ndichivhura makumbo ndikati izvozvi mufon1 mamsg haupedze. Vakaburitsa foni zvikanzi oyi mainini mutsvage mega. Ndakasimuka ndichinotora foni iya ndakabva ndavati maita basa yave yangu ndaakutonobvisa line renyu. Ndakapinda mumba ndokudongorera kuti ndione kana vachiteera. Ndakaona mboro yakukwidzwa kuti ibatwe nebelt reshort ndokuvhara neT-shirt vachisimuka kuuya mumba. Ndakamhanyira muspare mangu ndokusvikobvisa top yandaive nayo ndokusara nebra chete. Ndakanzwa yave knock padoor ndikati aiwa bamkuru ndichambochinja. Ndakavhura door ndakabata foni mumaoko ndikaona murume aita kunge abatwa nemagetsi akatarisa mazamu angu, ano matsvuku.
Ndakabva ndaona mboro ichipoya pabelt paya short rachisimuka. Ndakaseka ndichitizira muroom ndikati aiwa bamkuru maipa vakateerawo vachinge vaida kutora foni yavo ndokusvikonditi mba maoko ndikamboitawo sendairwisa ndikaona zvefoni zvasiiwa munhu atobvisa bra yangu apa ini wacho ndaakungoshinyirawo ndichivabvisa belt ndokunoriburitsa rino zimuzvambarara rakasviba kuti ndoo. Ndakaritambisa ndikaona vave kundipushira pamubhedha vachinokiya door. Vakasvikondiwira vachindibata nekutambisa beche zvekuti ndakaita waya kutadza kuziva zvaiitika. Ndakazovhura maziso ndavekunzwa mboro ichigumha nekupuruzirwa pabeche rangu ichizodzwa muto iyo wange wongochururuka.
Yakazonzi musoro wayo shweee zvishoma nezvishoma ikabva yatanga kuramba kuenda kumberi.Vakanyemwerera vachindikisa zvikanzi I love beche riri tight. Handina kudaira nekuti mboro yainge yorwadza zvino. Yakapinda yose vachiita zvishoma nezvishoma semunhu asingade zvavo. Mukadzi wavo akakomborerwa, murume anoziva kunyatsosvira uyu. Yakabairirwa zvino ndikachiinzwa kunaka kwayo. Ndakavadhonzera mudhuze ndikanzwa yarova chibereko ndikabva ndatunda ndokutopera simba. Murume zvino akamboreducer speed kusvika ndapicker. Ndakazomusimudzawo murume ndaakumupepeta. Baba vakasimba coz ex yangu ndakamboipepeta ikadonha. Ndakanzwa murume ave kubowa kunge mombe ndikaona ondinamatira zvichindodziisa chibereko changu chese.
Ko ndiko kunonzi kutunda ka uku zvekuti dai vaive necondom raigona kungosvitswa mu half. Ndakabva ndangotundawo pakarepo. Yakazoita zvekuvhomorwa kuburitsa, ndikanzwa vave kuti mainini munonaka kana maiguru venyu havasvike apa. Vakapfugama pasi ndokutanga kutambisa matinji angu vachibvunza kuti ndakamaita sei kuti arebe so.
Ndakazoona vave kunhanzva ndikanzwa kusemeswa. Vakaananzva zvese nekabhinzi apa ini ndainge ndangorara ndaneta. Vakatamba naro beche vachirinanzva zvekuti ndakabva ndanzwa simba richidzoka ndokuzonzwa ndave kuda kutunda ndokusimuka ndichitora towel rangu kunopukuta mboro yavo ndokuchitangisawo kuinanzva.
Pandakanzwa kuti vainge vonyanya kunakirwa ndakatya kutundirwa mumuromo ndokufongora ndichitaridza nzira. Rakarohwa beche neimwe speed yandakatya ndikanzwa yave kudzorwa murume ave kundinamira ndikaziva kuti zvaita ndakaatenderedza mazigaro angu mahombe ndichibva ndangotunda. Payakavhomorwa ndakada kusimuka ndikabva ndatadza ndokunozviwisira pamubhedha. Vakapfeka ndokusvikondipa kiss vachindizeezera munzeve kuti ndinonaka ndokubva vabuda. Ndakazosimuka ndakunogeza ndichidzoka ndokusvikorara kusvika ndazomutswa namhamha manheru vatopedza kubika. Baba vaye vafumoenda nhasi manje ndirikunzwa kuda just one round nhasi. Hameno kuti ndichawana here onogona kukwira.
beche riri tight
Mboro yakangonzi shweee
Previous articleNyoro naManager wepaLodge Part 2 – Married Woman kunakirwa nechihure
Next articleMasviriro andakaita shamwari yangu after ndamuwana achiyamwa mboro yebrother yangu